Shanghai PAMAENS TECHNOLOGY CO., LTD, unyanzvi ari R & D, kugadzirwa uye rokutengesa simba-rokuponesa kudziyisa uye kuputira zvigadzirwa. PAMAENS inopa yokugadza, kurovedza uye pashure-sale rimwe-chemabhazi basa. PAMAENS rava mutungamiriri mumunda chikumbiro kuti maindasitiri simba-rokuponesa kudziyisa michina kuChina uye kunze.
The kuputira Mabhachi, tangi & Drum kudziyisa Mabhachi uye michini Heaters isu yakatanga kwete kutapudza chete zvikuru simba rakawanda, kuburikidza kuwedzera chafariz kunyatsoshanda, kunatsiridza zvinhu uye kushanda zvakatipoteredza. Uyezve, zvinhu zvedu vakachengeteka kuti kushandiswa, noushamwari zvakatipoteredza, nyore kuisa pamwe refu kushandiswa upenyu, zvisingakuvadzi uye hwakavimbika unongotaura. kuputira yedu Mabhachi & magumbeze zvinonzi nevakawanda kushandiswa pamusoro mavharuvhu, flanges, zvikwepa, mapurasitiki michina, dryers, exchangers, pedza hurongwa etc. Drum & tangi Heaters zvinoshandiswa kudziyisa mhando dzose mvura zvakadai semvura, zvemakemikari zvinhu, uchi, mafuta, guruu etc.
Heating zvinhu, zvakadai katuriji hita, coils hita, tubular hita, zvedongo bhendi hita, naMika bhendi hita, vakakanda-mu hita, mhepo dzaserera hita uye mvura dzaserera bhendi Heaters, izvo zvinogona kuiswa pamusoro humburumbira kudziyisa yamarudzi ose epurasitiki michina, kusanganisira extrusion, jekiseni kuumbwa muchina, waya kudhirowa muchina, pelletize, Varidza filming muchina, epurasitiki marara uye vulcanizing muchina, etc. Vimba yemhando induction kudziyisa zvemichina uye makore akawanda kugadzirwa zvetsika Heaters, tine chivimbo kupa yepamusoro uye zvakanaka mutengo induction Heaters, pamwe chete yakanaka pamberi okutengesa kurovedza uye pashure rokutengesa mabasa.
Zvino tine vanachiremba vanoverengeka, vanatenzi uye mukuru mainjiniya, vakazvitsaurira kuna R & D mu remagetsi rwokugadzira. Uyezve, PAMAENS pamwe mumakoreji uye mumayunivhesiti mune China. With kunzwisisa dzakasiyana-siyana zvemaziso minda yakadzika, PAMAENS ndivo vakaita mukuumba induction Heaters kuti mafomu zvakasiyana
PAMAENS ane mweya kuvimbika, kuda chinzvimbo, kushanda zvakanaka uye kunaka. Tinotora simba rokuponesa kwete chete sebasa asiwo pasocial basa uye unodzokera Motherland yedu. kuvonga vepachokwadi kwamuri zvose uye tariro pamwe emakambani mu China uye kunze kusika munhu Mubatanidzwa nokuda nani zvakafanana yemberi pamwe chete.
PAMAENS vawana ISO9001 CE uye RoHS certificate. Pachirehwa kunyatsoteerera bvunzo uye kudzora ose chete chikamu zvigadzirwa uyewo ose kugadzira danho. PAMAENS akanga mvumo imupota uye ekisipoti rights.The zvigadzirwa vanotengeswa Europe, Middle East, South Eastern Asian, Australia, US, Taiwan etc. Isu vakazvipira kupa:
High unhu zvinogadzirwa
Free kurovedza naro uye kugadzira
One gore garandi
OEM uye magadzirirwo mabasa